मोदी सरकारको ‘अतिवाद’– साम्प्रदायिकता विरोधी वैचारिक पत्रकार गौरीको हत्या !
मोदीको ‘क्रुरता’— सन् २०१५ यता भारतमा ४ लेखक तथा पत्रकारको हत्या भइसकेको छ
निर्माण सञ्चार, एजेन्सी । मुख्यमन्त्री रहँदा गुजरातमा मुस्लिम समुदायमाथि ‘कत्लेआम’ गरेको आरोपमा लगभग अमेरिकी सरकारले भिसा दिन नै बन्द गरेका भारतीय वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यतिबेला फेरि ‘कत्लेआम’ दोषबाट मुक्त हुननसकेको आरोप भारतीय सञ्चार माध्यममा लागि रहेको छ ।
आफूलाई विश्वको सबैभन्दा ‘उदार प्रजातन्त्र’ बताउने भारतमा साम्प्रदायिकताको विरोधमा विचार प्रवहा गर्दै आएकी वरिष्ठ पत्रकार गौरी लंकेशको गोली हानी हत्या भएको छ । यो हत्याप्रकरण सँगै फेरि अर्काे पटक मोदी सरकारको ‘अतिवादी’ भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
हत्या गरिएकी पत्रका लंकेश दक्षिणपन्थी र हिन्दु अतिवादी राजनीतिप्रति आलोचकीय दृष्टिकोण राख्ने गर्थिन । फरक मत राखेकै आधारमा उनको हत्या गरिएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले बताइरहेका छन् भने भारतभरका पत्रकारहरु हत्याको विरोधमा उत्रेका छन् ।
दक्षिण बैंगलोरको राजराजेश्वरी स्थित आफ्नो निवासमा चर्चित पत्रकार लंकेशको मंगलबार गोली हानी हत्या गरिएको पुष्टि भएको छ ।
पत्रकार लंकेश कार्यालयबाट घर फर्केर कार पार्किङ गरी गेटभित्र प्रवेश गर्दै गर्दा मोटरसाइकलमा आएका व्यक्तिहरुले सात राउन्ड गोली प्रहार गरेका थिए ।
५५ वर्षीया लंकेश ‘कन्नाडा टेब्लोइड गौरी लंकेश पत्रिके’का संपादक थिइन ।
भारतीय नक्सलवादीलाई मुलधारको राजनीतिमा ल्याउन प्रयासरत उनी सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी र राष्ट्रिय स्वंयसेवक संघ (आरएसएस)को अतिवादी र साप्रदायिक राजनीतिको कटु आलोचक थिइन् ।
उनको अखबारमा छापिएको समाचारलाई लिएर भाजपा सांसद प्रल्हाद जोशीले उनीमाथि मानहानीको मुद्दासमेत लगाएका थिए ।
मोदी सरकारको ‘क्रुरता’
भारतमा सन २०१५ यता अतिवादी र अनुरदारवादी राजनीतिका आलोचक रहेका चार लेखक तथा पत्रकारको हत्या भइसकेको छ । सन २०१५ मा लेखक एमएम कालबुर्गीको हत्या गरिएको थियो भने बामपन्थी लेखक गोविन्द पंसारेको पनि हत्या गरिएको थियो ।
त्यस्तै पुनेमा नरेन्द्र दाभोल्करको पनि सन २०१३ मा हत्या गरिएको थियो ।
उनको हत्याबारे बिबिसीले लेखेको समाचार हेर्न क्लिक गर्नुहोस्
गौरीले लेखेको अन्तिम ट्विट के थियो ?
बुधबार, २१ भदौ, २०७४